Tag: lagu | Sagal Radio Services
Haweeney ka tirsanayd ciidamada Booliska oo lagu diley Muqdisho
Haweeney ka tirsanayd ciidamada Booliska isla markaana ka mid ahayd ganacsatada qudaarta ee suuqa Ansaloti magaalada Muqdisho ayaa saaka lagu diley goobta ay ganacsiga ku lahayd.
Ninkii ugu horeeyay ee lagu tallaalo xubinta taranka ragga oo aabbe noqonaya (sawiro)
Muwaadin u dhashay dalka Koofur Afrika oo lagu tallaalay xubinta taranka ragga ayaa la sheegay in xaaskiisa ay leedahay uur afar bilood ah.
Wariye Caawa ku dhaawacmay Muqdisho iyo Ruux Shacabka ah oo la Toogtay
Nuurre Maxamed Cali oo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala Muqdisho ayaa ku dhaawacmay Xalay qarax gaari uu watay loogu xiray, iyadoo xaafadda Ceel-qalow ee degmada Wadajir ay koox hubeysan isla Xalay ku toogteen qof rayid ah.
Dabley hubeysan oo xalay ku dishay sarkaal ka tirsan ciidamada nabadsugida mid kalana dhaawacay
Koox ku hubeysan bastoolado ayaa xalay ku weeraray degmada Kaaraan saraakiil ka tirsan ciidamada nabadsugida ee gobolka Banaadir.
Dad ku dhintay rasaas uu ku furay Askari ka tirsan Dowlada.
5 ruux ayaa lagu dilay nawaaxiga Dagmada Deynuunaay ee Gobalkaasi bay ka dib markii uu mid ka mid ah Ciidanka Dowlada uu u geystay fal barer ah.
DEG DEG: Wariye u shaqeeya Telefishinka Universal iyo Radio Kulmiye oo saaka lagu dhaawacay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • October 22, 2013
Wariye Maxamed Maxamuud Timacade oo ka tirsan Telefishinka Universal Tv iyo Kulmiye Radio ayaa saaka lagu dhaawacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir oo uu degenaa wariyuhu, iyadoo loola cararay Isbitaalka Madiina.